DataNumen: Ndị na-ere ahịa
Chọta onye reseller gị nso:
Jikọọ na azụmaahịa mpaghara na-enye ma na-akwado DataNumen ngwaahịa. Ọzụzụ ndị ọkachamara na ọrụ mwekota site na a DataNumen reseller ga-enyere gị aka inweta oke nloghachi na ego gị:
Global SHI International Corp Ekwentị: + 1-888-764-8888
Adreesị: Isi ụlọ ọrụ SHI
290 Davidson Okporo ụzọ
Onyedika, NJ 08873
Global SoftwareONE Ekwentị: + 41 44 832 41 69
Okwu: SoftwareONE AG | Isi ụlọ ọrụ
Global COMPAREX AG Adreesị: Leipzig, Germany
Global CACI International Inc Adreesị: Arlington County, Virginia, USA
Global Insight Enterprises Ekwentị: + 1-800-467-4448
Adreesị: Isi ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ
6820 S. Harl Ekele.
Global Synnex Corporation Main ekwentị: + 1-510-656-3333
Ahịa: + 1-800-756-9888
Adreesị: Isi ụlọ ọrụ
44201 Nobel mbanye
Germany CCP Software GmbH Ekwentị: + 49 6421 1701-0
Okwu: CCP Software GmbH
India Select Software (I) Pvt. Ltd. Ekwentị: + 91-80-25285265
Adreesị: Nke 14, Balaji Chambers
2ndFloor, 10th Okporo Mainzọ
Ekwentị: + 91 96322 27977
Adreesị: AB&D Software India Pvt Ltd.
# 2079, C ngọngọ, Kodegehalli,
Brunei Cogito Solutions Ltd. Ekwentị: + 852-23976665
Adreesị: Nkebi B, 13 / F., Winsan Tower,
98 Thomson Okporo,
Wanchai, Họng Kọng
Adreesị: Roomlọ 1105, C2, Hao Bai Da Sha,
Nke 50 Xisanhuan North Road, Mpaghara Haidian,
Uzbekistan Softline Group Ekwentị / Faksị: +7 (495) 232-00-23
Derbenevskaya nab. 7, nke 8,
Commonwealth of Independent States (CIS) & & mba Baltic Pba Consult LLC Pba Consult LLC
Ekwentị: + 7 495 797-89-97
Faksị: +7 495 797-89-85
Russia Syssoft, LLC Ekwentị: +7 (495) 646-14-71 ext.113
Pohodniy proezd 4/1, gbanyụọ. 111,
Ekwentị: +7 (495) 627-69-00
aghọ a DataNumen reseller:
Anyị na-anabata onye ọ bụla, gụnyere ndị na-ere ahịa bara uru, ndị na-arụ ọrụ sistemụ na ndị na-ahụ maka ndụmọdụ na-ere ọrụ na / ma ọ bụ mejuputa ngwanrọ ma ọ bụ ngwaike na ndị ọrụ njedebe, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị na-ere ngwaahịa na nkwalite site na ụlọ ahịa ire ere, ụlọ ahịa ngwanrọ, ụlọ ahịa kọmputa, ngalaba ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, wdg.
DataNumen program reseller kacha mma. N'ihi gịnị?
Ego dị ka 65%, mụbara site na arụmọrụ gị.
Maka onye na-ere ahịa ọhụrụ, anyị na-enye 10% nwepu ozugbo. Ozugbo i rere karịa ikikere 5 nke ngwaahịa ọ bụla n'otu ọnwa, ị ga-enweta opekata mpe 20% nwepu ego maka ịzụrụ ihe ọ bụla na ọnwa na-esote. Ma inwere ike nwetakwu ego site na ire ozo, dị ka ndị a:
Ọ bụrụ na ị rere karịa 5 ikikere na otu ọnwa, anyị ga-enye gị 20% nwepu na ọnwa na-abịa!
Ọ bụrụ na ọ karịrị 10 ikikere, ego a ga-enwe 25%!
Ọ bụrụ na ọ karịrị 20 ikikere, ego a ga-enwe 28%!
Ọ bụrụ na ọ karịrị 50 ikikere, ego a ga-enwe 35%!
Ọ bụrụ na ọ karịrị 100 ikikere, ego a ga-enwe 50%!
Ọ bụrụ na ọ karịrị 200 ikikere, ego a ga-enwe 65%!
Ree More ma Nweta More! Nkechitart Ugbu a!
Mara: Ọ bụrụ na ahịa gị daa, mgbe ahụ a ga-ebelata ego ego a.
Anyị nwere ike soro gị rụọ ọrụ mgbasa ozi kwadoro. Enwere ọnụahịa pụrụ iche maka ndị na-ere ahịa, yana ọtụtụ ego, ahịa ezumike, akwụkwọ ozi na ọtụtụ ndị ọzọ. Nwere ike ịrịọ arịrịọ oge niile iji nweta ụdị mgbasa ozi n'ụdị ọ bụla. I nwekwara ike ịdabere na mmụba pasent ọrụ mgbe ị na-ahazi akụkọ postịbanye, mgbasa ozi mgbasa ozi, na omume ahịa. Mgbe ụfọdụ, anyị nwedịrị ego na-eme ụdị ihe ahụ. Have nwere echiche? Kpọtụrụ anyị!
Ajuju ọ bụla, aro na arịrịọ ga-atụle ma ị ga-enweta nzaghachi dị elu n'oge kachasị dị mkpirikpi. Biko, jiri nke anyị ụdị nzaghachi ịjụ ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ mee arịrịọ gbasara mmemme reseller anyị.
Ihe nchịkwa reseller anyị na-achịkwa site na MyCommerce.com, onye ndu uwa na programmụ reseller software. Ihe omume ahụ bụ nnọọ mfe. Enweghi zoro ezo costs na ọ bụ free ịbanye.
Pịa ebe a ịdebanye aha maka mmemme Reseller ugbu a
Mgbe ndebanye aha, anyị ga-ezitere gị ozi nkwenye nke nwere ID reseller gị. Akaụntụ reseller gị ga-abụ kwadoro ozugbo ma ị nwere ike iji ya zụta ngwaahịa anyị ugbu a, dị ka ndị a:
Gị webusaiti anyị wee pịa njikọ MyCommerce maka ngwaahịa kwekọrọ na ịchọrọ ịzụta.
Na mpempe akwụkwọ MyCommerce, na “Iweghachi Ahịa / Reseller” ngalaba, ndenye ihe reseller gị na paswọọdụ ịbanye. Mgbe ahụ ị nwere ike ịzụta ngwaahịa ahụ. Enwere ike ịchọta ID reseller na email nkwenye ndebanye aha anyị zitere gị, na paswọọdụ bụ nke ị na-etinye mgbe ị debanyere aha.
Na mbido anyị na-enye mbelata 10%, ma ozugbo ị rere karịa ikikere 5 nke ngwaahịa ọ bụla n'otu ọnwa, ị ga-enweta nwepu ego maka ịzụrụ ihe ọ bụla na ọnwa na-esote.